Bọchị: Machị 27, 2020
Minister nke Health dere 27.03.2020 Fahrettin di-ekwu na ha na-ebi ndụ coronavirus isi isiokwu na-akọwa mpempe akwụkwọ: "ndụ agbanweela kemgbe 10 March, Turkey. Egosiputa ihe omuma n’ime otutu puku, onu ogugu ndi oria na-erute 90 puku [More ...]
Na Aselsan, ebe ihe dị ka mmadụ 8100 na-arụ ọrụ, nnwale coronavirus nke onye ọrụ ụlọ ọrụ dị mma. N'ihi okwu ikpebisila ike ịchọpụta n'oge ezumike ndị ọrụ, ndị ọrụ ibe niile nwere ezumike nhazi iji mezue ụbọchị 14. [More ...]
N'ime usoro nke agburula n'ihi ntiwapụ nke Coronavirus, edobere aha ozi iji chekwaa ohere mmadụ na ụzọ ụgbọ oloko na trams. Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) enyemaka na Turkey obodo kasị ukwuu okporo ígwè ọrụ [More ...]
IETT mepụtara usoro ọzụzụ maka ndị ọrụ ya ịzụlite nkà iji jikwaa mmetụta ndị dị mgbagwoju anya dịka nchekasị, nchekasị, obi ilu, iwe nke coronavirus kpatara na ịnagide nchekasị. Ndị njem njem ọha na Istanbul na-efe efe n'ihi ọrịa coronavirus [More ...]
Oge Ọrụ nke Ankarakart Ọrụ Centlọ Ọrụ Na-arụ Ọrụ gbanwere
Ka ọ dị na 19, EGO General Directorate nke Ankara Obodo ukwu gbanwere oge ọrụ nke ụlọ ahịa azụmahịa Ankarakart ebe a kpọtụrụ ụmụ amaala n'ime oke nke nha megide ọrịa coronavirus (Covid-27.03.2020). Ankarakart Center Centres dị ọhụrụ [More ...]
Igwefoto ji igwe mee ihe na ebe obibi ipul YHT na Marmaray
Ihe ndị megidere ọrịa coronavirus (COVID-19), nke na-agbasa n'ụwa niile, na-aga n'ihu n'okporo ụzọ ụgbọ oloko. N'ọnọdụ a, igwefoto igwe ọkụ maka ụfọdụ ụlọ na ọdụ ụgbọ ala, [More ...]
France agbanweela ụgbọ oloko dị elu (TGV) gaa ụlọ ọgwụ iji zipu ndị ọrịa ebe ahụ na mpaghara ndị ọzọ, ebe ọrịa Covid-19 gbasara ngwa ngwa yana ebe nlekọta ahụ ike na mpaghara ọwụwa anyanwụ ezughị. Ọkachasị n'obodo Strasbourg [More ...]
Ndenye aha kaadị Denizli Ga-alaghachi Machị
Obodo Denizli Metropolitan echefughi ụmụ akwụkwọ ahụ nwere ndenye aha "Denizli Student Card" n'ihi agụmakwụkwọ ahụ amachibidoro n'ihi coronavirus. Egoghachitegoro ndi ozo nke umu akwukwo ndi buru ndi March 2020 na kaadị Denizli. Denizli [More ...]
Ntuziaka Coronavirus maka Childrenmụaka Dị Egwu 'Overchọ ịmata Ihe Na-emeri Egwu'
A tụgharịrị "Ntuziaka Nje Virus nke Ndị Na-ahụ Maka "mụaka", nke e mepụtara na mmekorita ya na Children'smụaka Children'smụaka andmụaka nke bylọ Ọrụ Nkwado Children'smụaka (Aka) na-akwado ya. Directory, Turkey nnọchiteanya nke International Aka-on-çocukistanbul na n'ịgba Education [More ...]
Njikwa anya nke mmekọrịta na Socialgbọ njem Ọha
A na - emejupụta okirikiri nke pasent 50 nke ndị njem n'ụgbọ njem ọha na ọdụ ma nọrọ ọdụ n'akụkụ nchebe n'akụkụ ọrịa nje corona na Antalya. Antalya mepere emepe rụkwara nyocha nke ụgbọ njem ọha na eze. uwe ojii [More ...]
Ndi isi obodo Izmir lebara ugbo ala na obere ulo ugboala ka ha buru agha nke ibuso oria ohuru Coronavirus ahu. Ndi isi obodo Izmir na-elekọta bọs na obere obere ọdụ ụgbọ ala intercity megide ntiwapụ nke ọrịa Coronavirus ọhụrụ. Ministri nke ime obodo iji lụsoo ọrịa ahụ ọgụ [More ...]
Obodo Manisa, nke na-emetụta usoro coronavirus niile n'obodo ahụ, anaghị egbochi ọmụmụ banyere ọgwụ ọcha na ịdị ọcha. N'ọnọdụ a, ndị otu obodo na-arụ ọrụ rụrụ arụ na-egbochi ihe mebiri emebi na ngafe na bọs. coronavirus [More ...]
A na-enyocha Transportgbọ njem Ọha na Eze megide Coronation na Mersin
Obodo Mersin na-aga n’ihu na-arụ ọrụ dị mkpa site na ime ihe iji chekwaa ahụike ọha na eze na ntiwapụ nke ọrịa coronavirus (COVID-19). Ndi isi obodo di n’iru ya na ndi ozo nke ndi ministri n’ime ime zigara Ndi isi ochichi iri ato. [More ...]
Onye isi obodo nke Gaziantep Fatma Şahin kwupụtara na njem onye na-ere ọgwụ, onye wepụrụ ibu dị na steeti ahụ n'ime oke ọgụ megide Corona Virus (COVİD-19), a ga-enye ya n'efu ọnwa atọ. Oria ojoo a di mkpirikpi oge n’uwa [More ...]
Mụrụ Anya banyere ọkụ Sakarya
Ndị otu ngalaba na-ahụ maka okporo ụzọ matara 'mkpọtụ n'ụlọ' mkpọtụ okporo ụzọ dị n'okporo ụzọ dị iche iche na Bulvar, Gümrükönü, Soğanpazarı, Ylọ alakụba Yeni na Hospitallọ Ọhaneze ebe obodo anyị nwere ọnụọgụ ọkụ na ndị njem. [More ...]
Njikere 'nọrọ n'ụlọ Kayseri' si na ụzọ ọkụ ọkụ na akara ngosi dijitalụ
Onye isi obodo nke Obodo Kayseri Oku Memduh Büyükkılıç "nọrọ n'ụlọ", nke o mere iji bụrụ ndị ọrịa coronavirus na-emetụta ụwa, gosipụtara na ọkụ ọkụ okporo ụzọ na akara ngosi dijitalụ. Obodo Kayseri [More ...]
Ndị ọkachamara na-ahụ maka ahụike iji Marmaray, Başkentray na İZBAN n'efu
Mehmet Cahit Turhan, Mịnịsta nke Transportgbọ njem na akụrụngwa nke Republic of Turkey, kelere ndị ọrụ ahụike na-arụsi ọrụ ike maka mgbake nke ndị ọrịa jidere Kovid-19 na-apụta na Wuhan, China ma gbasaa n'ụwa niile. World [More ...]
Anyị na-ada n'azụ ọkpụrụkpụ ọkọnọ
Ọrịa corona (COVID-19), nke malitere na Wuhan, China wee gbasaa China na ụwa niile, na-emetụta ọ bụghị akụ na ụba China kamakwa akụ na ụba ụwa. Steeti, ụlọ ọrụ na ndị mmadụ na mmejuputa usoro na iwu ndị a [More ...]
Balıkesir Obodo ukwu gbakwụnyere ihe ọhụrụ na mbọ ya na-akwado maka #EvdeKal. Ndi obodo ahụ kpọrọ oku maka ụmụ amaala site na ịde “CUP AT G H n’ụlọ” n’elu ọkụ okporo ụzọ dị n’usoro akara obodo. Balıkesir Obodo Ime Obodo, ihe niile [More ...]
Ministry of Transport mere nkwupụta gbasara Canal Istanbul Tender
Ministri Transportgbọ njem na akụrụngwa kwuru, "Ọrụ a na-arụ na Canal Istanbul na-aga n'ihu, taa, ọrụ eburu ma ọ bụ ichedo àkwà mmiri akụkọ ihe mere eme abụọ nke agbadoro ọrụ ahụ. [More ...]
Nkwado dị ukwuu sitere na Bursa Metropolitan Obodo bịara mgbasa ozi nke Minista Ahụike butere ụmụ amaala n'ime oke ọgụ megide covid-19 (coronavirus) ma na-ezube igbochi mgbasa nke nje site na ịnọ n'ụlọ. Nyocha dijitalụ niile dị n’obodo na [More ...]
Ationgbọ njem anaghị anọdụ ala mmadụ abụọ n'akụkụ akụkụ nke bọs ya
TransportationPark, otu n'ime ndị mmekọ nke Kocaeli Metropolitan Obodo, malitere iji ikike njem pasentị iri ise mee njem n'ụgbọ ya ndị a, dịka okirikiri nke Ministrị nke ime obodo nyere. N'ọnọdụ a, ụgbọ ala ndị TransportPark na-achịkwa etiti na-ejikwa ya ozugbo, ma ọ bụrụ [More ...]